Kenya - Musqulaha dadweynaha ee dalalka dunida saddexaad ayaa badanaa ah musiibo dhammeystiran. Waxay yihiin kuwo niyadjabsan, daacadnimo iyo shamac wayn. Hadda waxaa jira fayadhowr joogta ah oo hadda taagan xal. Waad ku mahadsantahay Nidaamka Sanjimida San Francisco.
Filed Under: Xalinta Nadaafadda Tagged Iyada oo: Musqulaha musqusha, Kenya, musqulaha dadweynaha
Kenya - Beeralayda yaryar, kharashka bacrimiyuhu aad ayuu u sarreeyaa. Xalka: waxay isticmaalaan Coca Cola cap si ay u qaataan bacrimin ah tiro yar!